၂၄ နာရီအတွင်း မိုးကြီးရေလျှံမယ့် ဒေသများ – Moe Tauk Pan
၂၄ နာရီအတွင်း မိုးကြီးရေလျှံမယ့် ဒေသများ
မုတ်တမပငျကှအေ့တှငျးမှ low pressure တှေ အားအလှနျကောငျးလာပွီး မှနျပွညျနယျ ရနျကုနျတိုငျး ဧရာဝတီတိုငျးပဲခူးတိုငျး ၂၄နာရီအတှငျးမိုးမြား စှာရှာသှနျးနိုငျပွီး
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မိုးလဝေသနှငျ့ ရာသီဥတုအခွအေနကေို ၂၄နာရီလုံး အဆငျ့မွငျ့မိုးလဝေသဂွိုလျတုမြားမှထောကျလှမျးကွညျ့ရှုနပွေီးတိကတြဲ့ခနျ့မှနျးခကျြတှကေို
အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ စက်ကနျ့မဆိုငျးပဲ ခနျ့မှနျးပေးနပေါတယျ လူအမြားသိရှိစရေနျ public ဖှငျ့ပွီး share ပေးကွပါ
ဟုမ်မလငျး ထမံသီ နနျးယှနျး ခန်တီး ဖားကနျ့ တနိုငျး ပူတာအို မိုးတှရှောမယျနျောမကှေးတိုငျးအနောကျပိုငျး မိုးမြားစှာရှာတော့မယျနျော ခြောငျးရသေတိထားကွပါ၂၄နာရီလုံး အဆငျ့မွငျ့မိုးလဝေသဂွိုလျတုမြားမှထောကျလှမျးကွညျ့ရှုနပွေီး ခနျ့မှနျးသတိပေးနပေါတယျ အမြားသျစရေနျ public ဖှငျ့ပွီး share ပေးကွပါ
ကနျဆငျမိုး တှရှောမယျ 🌧🌧🌧
15/16/17 october 2021 ၃ရကျအတှငျး ကခငျြပွညျနယျ စဈကိုငျးတိုငျး မကှေးတိုငျး(မိုးကွီးနိုငျ )ပဲခူးတိုငျး ရနျကုနျတိုငျး ဧရာဝတီတိုငျး မှနျပွညျနယျ ကရင့ပွညျနယျ တနင်ျသာရီတိုငျး တှမှော မိုးတှမြေားစှာရှာသှနျးမှာဖွဈပါတယျရကျဝေး လဝေးရကျနီးတှလေညျး အကွိမျကွိမျသတိပေး ခနျ့မှနျးပေးခဲ့ပါတယျ
ယခုလညျး အရေးကွီးခြိနျဖွဈလို့ ၂၄နာရီလုံး အဆငျ့မွငျ့ဂွိုလျတုမြားမှ အခြိနျပွညျ့ထောကျလှမျးစောငျ့ကွညျ့ပွီး လစေီးကွောငျးနဲ့မိုးတိမျတှကေို တှကျခကျြစီစဈပွီး မွို့တငျမက ကြေးရှာမြားအထိကိုပါ ခနျ့မှနျးပေးနပေါတယျအခြိနျနဲ့အမြှသိရှိကွစရေနျ မငျးဂှတျသီးလေးကို follow. see first. လုပျထားကွပါ
အမြားသိရှိ ဘေးကငျးကွစရေနျ public ဖှငျ့ပွီး share လုပျပေးကွပါ
မငျး ဂှတျ သီး Su Su San
မုတ္တမပင်ကွေ့အတွင်းမှ low pressure တွေ အားအလွန်ကောင်းလာပြီး မွန်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်း ၂၄နာရီအတွင်းမိုးများ စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ၇၂နာရီအတွင်းမိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေကို ၂၄နာရီလုံး အဆင့်မြင့်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုများမှထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေပြီးတိကျတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စက္ကန့်မဆိုင်းပဲ ခန့်မှန်းပေးနေပါတယ် လူအများသိရှိစေရန် public ဖွင့်ပြီး share ပေးကြပါ
ဟုမ္မလင်း ထမံသီ နန်းယွန်း ခန္တီး ဖားကန့် တနိုင်း ပူတာအို မိုးတွေရွာမယ်နော်မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်း မိုးများစွာရွာတော့မယ်နော် ချောင်းရေသတိထားကြပါ
၂၄နာရီလုံး အဆင့်မြင့်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုများမှထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေပြီး ခန့်မှန်းသတိပေးနေပါတယ် အများသ်စေရန် public ဖွင့်ပြီး share ပေးကြပါ
ကန်ဆင်မိုး တွေရွာမယ် 🌧🌧🌧
15/16/17 october 2021 ၃ရက်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း မကွေးတိုင်း(မိုးကြီးနိုင် )
ပဲခူးတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင့ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်း တွေမှာ မိုးတွေများစွာရွာသွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်
ရက်ဝေး လဝေးရက်နီးတွေလည်း အကြိမ်ကြိမ်သတိပေး ခန့်မှန်းပေးခဲ့ပါတယ်
ယခုလည်း အရေးကြီးချိန်ဖြစ်လို့ ၂၄နာရီလုံး အဆင့်မြင့်ဂြိုလ်တုများမှ အချိန်ပြည့်ထောက်လှမ်းစောင့်ကြည့်ပြီး လေစီးကြောင်းနဲ့မိုးတိမ်တွေကို တွက်ချက်စီစစ်ပြီး မြို့တင်မက ကျေးရွာများအထိကိုပါ ခန့်မှန်းပေးနေပါတယ်
အချိန်နဲ့အမျှသိရှိကြစေရန် မင်းဂွတ်သီးလေးကို follow. see first. လုပ်ထားကြပါ
အများသိရှိ ဘေးကင်းကြစေရန် public ဖွင့်ပြီး share လုပ်ပေးကြပါ
မင်း ဂွတ် သီး Su Su San
လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး နှဈဆယျကြျောကတညျးက သတငျးစာထဲထညျ့ပွီး ခြီးကြူးခံခဲ့ရတဲ့ မအူဝဲရဲ့အကွောငျး
ခေါင်းတအားကိုက် လို့ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လျှင် ဒီလိုလေး...
မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အမှန်တရားတွေများလား ...
မြေတွေကို အကွက်ရိုက်ရောင်းနေသူတွေက ဝယ်သူတွေအပေါ်...
ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့...